Carbon mune tundra | Green Renewables
Iyo tundra inogona kuve sosi yekuburitsa kabhoni
Iyo tundra itsime rakanakisa re carbon... Zvirinani zvaive. Mazuva ano, kugona kwayo kwekuchengetedza kwakakuvara zvakanyanya, nekuda kwekuwedzera kwetembiricha: iyo zvipenyu mupenyu dzinoburitsa zvakanyanya CO2 mudenga, nepo iyo photosynthesis yekubata michina ichikanganiswa pane mamwe mazinga.
Neshanduko yemamiriro ekunze, zvinomera uye zvinhu zvipenyu zvaigona kuburitsa zvimwe carbonmuchimiro che kabhoni diamoni kana methane, kupfuura zvavaigona kuchengeta. Kwemakore anopfuura gumi ikozvino, vaongorori vakamira panzvimbo yekutsvaga ye Zakenberg, kuchamhembe kweGreenland, ongorora kabhoni chiyero chetundra yese iyo hemisphere mawodzanyemba.
Mune chidzidzo chakaburitswa mumagazini Chinyorwa cheGeophysical Research, timu inotungamirwa na Magnus Lund inoratidza kuti ma CO2 emweya anokonzerwa nehupenyu zvipenyu anowedzera sezvo tembiricha inokwira.
Kuisa iyo kabhoni chiyero yeiyo tundra, masayendisiti akadzidza maitiro maviri: mwero wekabhoni wakaburitswa muchimiro che CO2 kufema, uye chiyero chakachengetwa nemiti kuburikidza ne photosynthesis. Kubva pamatanho maviri aya, zvinokwanisika kuona kana iyo tundra iri sosi kana tsime re carbon.
El kudzidza inoratidza kuti CO2 chisi chinokonzerwa nekufema kwemhuka chinowedzera zvakaringana ne tembiricha. Kune rimwe divi, iyo kabhoni yekuchengetedza kugona inoenderana neiyo photosynthesis inoderera sezvo tembiricha inowedzera. Sezviri pachena izvi kuchengetedza inoguma apo tembiricha inodarika 7ºC.
Mamwe mashoko - Google inogadzira kabhoni tsoka yayo kuruzhinji
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Tora co2 » Iyo tundra inogona kuve sosi yekuburitsa kabhoni
Indonesia inopa kurambidzwa kwekutengeswa kwemamineral mbishi
Izvo zvikonzero nei kuchinaya zvakanyanya kuchamhembe kwenyika